» अपडेट–सञ्चारकर्मी मनोहर ढकालको मृत्यू, हत्या कि दुर्घटना ?
२६ पुष २०७५, बिहीबार ०८:५८
मकवानपुर, २६ पुस । मकवानपुरका चर्चित सञ्चारकर्मी मनोहर ढकालको रहस्यमयी मृत्यूले मकवानपुरमा खैलाबैला मच्चिएको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ शहिद स्मारक गेट नवलपुर निवासी ढकाल करिब दुई दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय थिए ।
वि.सं. २०७५ साल पुस २५ गते साँझ हेटौँडा १२ पदमपोखरी पान्तलेमा अवस्थित श्री बुद्ध माविमा अध्यापन सकेर छुट्टी भएपश्चात हेटौँडा आएका ढकाल एकाएक हेटौँडा ११ थानाभर्याङ नजिकैबाट हेटौँडा १ भैरव डाँडा जाने बाटोबाट राप्ति नदितर्फ जाने पैदल मार्गमा मृत अवस्थामा फेला परेका हुन् । ढकाल स्कूलकै सहकर्मी माधव गौतमसँग खाजा खाएर हेटौँडाबाट नवलपुर घरमा जान्छु भनी छुट्टिएका थिए । घर जान्छु भनेर हिँडेका ढकाल साँझ मृत अवस्थामा फेला परे । उन पार्थिव शरिरको अहिले हेटौँडा अस्पतालमा पोष्टमार्टमको प्रकृया कार्य भईरहेको छ तर पोष्टमार्टम भने सुरु भइसकेको छैन । उनको टाउको र मुहारमा चोट देखिन्छ ।
घटना र घटनास्थलबारे विश्लेषण गर्दा केही प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । ति हुन् :
१) स्कूलबाट बजार आईपुगेसँगै सहपाठीहरुसँग खाजा खाएर घर जान्छु भनेर छुटिएको मान्छे अँध्यारो हुनै लाग्दा किन भैरव डाँडा तिर लागे ? उननलाई कसले त्यहाँ बोलाएको हो ?
२) भैरव डाँडाको मेन बाटो छोडेर उनी किन जंगलभित्र पैदल बाटोतिर गए ?
३) उनको बाईक किन राम्रै अवस्थामा भेटियो ?
४) शवको वरपर सिरिन्ज किन भेटियो ?
५) उनको मोबाईल र पर्समा भएका सामानहरु किन गायब छन् ?
६) शवभन्दा निकै पर पर्स भेटियो, उनका झोलाका सामानहरु छरपष्ट भेटिनुमा के रहस्य छ ?
७) उनको घाँटीमा थिचिएको जस्तो निलडाम किन छ ?